Turkiga oo xiray Lammaane Yuhuud ah oo lagu eedeeyay Basaasida Qasri uu leeyahay Madaxweyne Erdogan - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa dalka Turkiga ku xiran lammaane u dhashay dalka Israel oo la qabtay iyagoo sawirro ka qaadaya Qarsiga Madaxtooyada dalkaasi ee loo yaqaan Dolmabahce.
Maxkamad ku taal dalka Turkiga ayaa kordhisay xariga lamaanahan Yuhuuudda ah oo sawiray qasri mar loo isticmaali jiray inay dagaan madaxda Turkiga, waxaana la mamnuucay in dhismahaasi sawirro laga qaado.
Lamaanahan ayaa xabsiga ku sii jiri doona ilaa inta ay ka bilaabaneyso maxkamadeyntooda. Natalie iyo Mordi Oknin, oo labaduba degan ayaa loo xiray tuhun la xiriira basaasnimo kadib markii la arkay iyagoo ku dul wareegaya oo muuqaallo ka duubay Qasriga Dolmabahce xilli ay ku safrayeen Doon.
Wasiirka arrimaha dibadda Yuhuudda Yair Lapid ayaa sheegay fiidnimadii Jimcaha inuu xiriir la sameeyay qoyska lammaanaha, wuxuuna meesha ka saaray in laga yaabo inay u shaqaynayeen hay’ad Israa’iili ah ama sridoonkooda.
Qareenka u doodaya lamaanahan oo lagu magacaabo Nir Yaslovitzh, ayaa sheegay in dacwad oogayaasha dowladda Turkiga ay runtii raadineyso eedeymo la xiriira basaasnimo. “Dambigooda kaliya ayaa ah inay sawireen qasriga Erdogan xilli ay ku guda jireen safar Dalxiis” ayuu yiri,
Qarsiyada Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan la ogoleyn in sawirro laga qaado, waxaana loo sheegaa dadka dalxiiska ah ee taga dalkaasi, waxayna arrintan xiisad ka dhex dhalisay dalalka Isreal iyo Turkey oo horeba dhowr jeer isugu dhacay.
Previous articleSheekh Caan ah oo Taliye Odowaa ku eedeeyay inuu Boob ku hayo Dhul uu ku leeyahay Muqdisho
Next articleXOG: Maareeye oo Dib ugu biiray Kooxda Farmaajo iyo Qodob aysan ku Aamini karin